Izindwangu zangaphansi zabesilisa |
Izimpahla zangaphansi zabesilisa
I-Anti Bacterial Plus Size Waist Band Elastic Daily Mens Briefs
Indwangu ethambile ye-Ultra, uphefumula kalula futhi ulula kunezingubo zangaphansi zikakotini
I-3D U-POUCH YE-ULTRA ROOMY: Idizayini ye-Ultra U-pouch ingezwe ku-sexy ngaphansi kwamabhulukwe ukunikeza isikhala esithe xaxa sezitho zangasese zamadoda ngaphandle kokukhishwa noma ukucindezelwa. Kuyasiza ukukwenza uzethembe futhi ube nomdlandla ngokugqoka izikhwama zethu ezinkulu zesikhwama
Ukuhlala okuqinile nokuthambile beka okhalweni nge logo yakudala okuhle ukunciphisa ukuvusa isikhumba sakho
Ngokwezifiso Umbala Anti Anti Static Soft Ukotini Abaphefumula Izitabane Zangaphansi
Ezemidlalo zabesilisa eziphefumulelwe umshayisibhakela ngendwangu yeCool Dri ekhotha umswakama kude nesikhumba ukukugcina upholile futhi womile; Hlala umaka mahhala ukuthola ukunethezeka kwamahhala ngendiza yendabuko.
Ukotini Owenziwe Ngokushesha Owenziwe Ngokwezifiso Wensiza Yangaphansi Eyisisekelo
IMesh Boxer Briefs: I-90% i-polyester engu-10% i-spandex, enye yezingubo zangaphansi ezisebenza ngokuphefumula futhi ezisheshayo.
Indwangu Izinzuzo:Izindwangu zangaphansi zokuphefumula nezomswakama eziphefumulayo nezomswakama zikugcina womile futhi upholile usuku lonke. Izambatho zangaphansi zepoudew zamadoda zilungele ikhaya, ukuzivocavoca umzimba, ukuhamba nezemidlalo.
Izindwangu zangaphansi eziyisisekelo zomswakama ongasindi
Ukuphefumula okumangazayo nokusindayo okukhotha umswakama kugcina umzimba wakho womile futhi upholile usuku lonke.
Ngenxa yalolu lwazi olunezikhala, izikhindi zethu zesibhakela zingenye yezingubo zangaphansi eziphefumula kakhulu.
Hlala ubeke okhalweni, uphefumula, izifinyezo ezisheshayo zomshayi wesibhakela zikuvumela unethezeke lapho uhamba.
Akukho ukuthungwa noma ukuthungwa okukunika ubushelelezi.
Isikhwama esigcwele esigcwele nokuvuka okude kwegumbi eliningi.
Enhanced ukunyakaza gusset ukuze uthole induduzo eyengeziwe.
Vula i-Crotch Anti-Bacterial Breathable Cotton Mens Underwear Boxer
izingubo zangaphansi ngobuningi zabesilisa ngeFruit Of The Loom enikeza ukungabi namaki, induduzo yosuku lonke nempukane emise okwesekelo; Izindwangu zangaphansi zabesilisa, abesilisa abangaphansi komoya abaphefumulayo banemikhonto emibili yokuzivikela; Isici se-IntelliFresh sabesilisa abangaphansi kwezingubo zangaphansi sivimbela amabhaktheriya abangela iphunga futhi sinikeza ukuvikelwa kwephunga okuhlala isikhathi eside